00:00 ေဆာင္းပါး No comments
တန်းတူရေး ရှိမှသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာ တန်မည်။ ဒီနေ့ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်မှာ ဦးဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ မပြောင်းနိုင်လဲနိုင်တာဟာ အတော့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။တစ်ခါတလေ ပြည်တွင်းက အဖြစ်အပျက်တွေက ပြည်ပက ဦးဇင်းတို့ကို ဘာကြောင့် ရိုက်ခတ်ရလဲ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ ယခုခေတ်မှာ ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးဖြစ်နေလို့ပေါ့ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ နေလိုမရတဲ့ ခေတ်မှာ လူတွေဟာ အကြောက်တရားက သူတို့ကိုပြန်ပြီး ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ တလောက ဖြစ်ပျက်နေခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူများစုက လူနည်းစုရဲ့ ဥပဒေချိုးဖောက်နေတာကို ခံနေရလိုဖြစ်ပါတယ်။
မိမိက ဘာကြောင့် အဲဒီလိုပြောရတာလဲဆိုရင် မိမိတို့မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်သမျှကိစ္စတွေက မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများက ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မီဒီယာတွေက သွေးထိုးလုပ်ဆော်မှုတွေက အများစုဖြစ်ပါတယ်။သတင်း စာလောကပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အရည်အသွေးမရှိ အညှိအဟောက် သတင်းက အများစုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တမျိုးမရိုးအောင် ဖြစ်နေတဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံ အခြေနေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက အာရုံစိုက်နေကြတာ ဘုန်းတော်ကြီးများရဲ့ အပြောအဆိုက ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ တရားကို ချိုးဖောက်ရောက် ဖြစ်နေပါတယ်။လာသမျှ ပြင်ပကမ္ဘာက သတင်းသမားတွေ နဲ့တွေတာ ကောင်းတာရှိသလို ဆိုးတာတွေလည် ရှိစမြဲပါဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးသားတဲ့ ပြည်သူတွေက ဘုန်းတော်ကြီးများ ပြောသမျှကို နားထောင်ကျတော့ ဆရာမှားက တပည့်တွေလည်း မှားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားရေး လုပ်နေတဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာက လူတွေရဲ့ စရိုတ်ကို မြန်မာဘုန်းကြီးများ အတုယူသင့်ပါတယ်။ဘာသာတရားဆိုတာက ကိုးကွယ်ရာသာ ဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကို ထပ်ပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်အောင် လမ်းပြပေးတဲ့ အရာဖြစ်တာမို့ ဆရာတော် သံဃာတော်များ အချိန်မီပြုပြင်သင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောပါရစေ နော်ဝေးနိုင်ငံဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ တစ်ကနေပြီးငါးအထိ အဆင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေကတော့ ငါးသန်းနည်းပါးရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့လောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လူများစုကအုပ်ချုပ်ရေးကို ဒီမိုကရေစီဟု ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ကြသည်။ လူမျိုးတိုင်းမှာ အခွင့်အရေးညီတူညီမျှရှိသည်ကို တန်းတူရေးဟု ဆိုရသည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးနေသည့် နိုင်ငံတစ်ခုမှာ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းရှိသည့် လူမျိုးတန်းတူရေး ရှိဖို့ ညှိရသည်။
သို့မှသာ ဒီမိုကရေစီအသီးအပွင့်ကို ပြည်သူတိုင်း ခံစားနိုင်ပြီး လူမျိုး၊ ဘာသာစကားကို အကြောင်းပြု၍ ဒုတိယတန်းစားနိုင်ငံသားများ မရှိတော့သည့် တန်းတူအခွင့်အရေးကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးပင် တွေးကြည့်ပါ။ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုတွင် အသင်းဝင်များကို ခွဲခြားဆက်ဆံလျှင် ရေရှည်သွား၍ မရပါ။ နိုင်ငံတစ်ခုမှာလည်း အုပ်စုတစ်ခုက အခြားအုပ်စုများကို အနိုင်ကျင့်နေလျှင်၊ လူမျိုးတစ်မျိုးက အခြားလူမျိုးများကို နိုင်ထက်စီးနင်းပြုမူနေလျှင် ပြိုကွဲဖို့သာ ရှိသည်။ လူမျိုးတိုင်း အတူနေ၍ ရအောင် မူများ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ ဥပဒေများ၊ ပေါ်လစီများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ ညီတူညီမျှ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် ယင်းလိုအပ်ချက်များ၏ အခြေခံဖြစ်သည်။ ယင်းလိုအပ်ချက်များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု မရှိရပါ။ တန်းတူရေးဟု ဆိုရာ၌ လူမျိုးတစ်မျိုးက ထမင်းကြိုက်၍ နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာ ထမင်းချက်စေပြီး ညီတူညီမျှ စားသောက်စေသည်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိမိတို့အိမ်မှာ မိမိတို့ကြိုက်သည့် ဟင်းရမယ်များကို မိမိတို့ကြိုက်သည့်နည်းဖြင့် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်သည်ကို ဆိုလိုသည်။ လူမျိုးတိုင်းမှာ အကြိုက်ကိုယ်စီ ရှိကြ၍ တန်ဖိုးမတူကြပါ။ တန်းတူရေးသည် ယင်းအကြိုက်နှင့်တန်ဖိုးကို အလေးထားသည်။ ယင်းအကြိုက်နှင့်တန်ဖိုးကိုလည်း ဘုန်းကြီးအများစုက သာစေနာစေ ဆရာကြီး ဝင်လုပ်စရာ မလို။ ဆရာကြီး ဝင်လုပ်မည့်အစား ယင်းအကြိုက်နှင့်တန်ဖိုးများကို ဘုန်းတော်ကြီးအများစုက အမွေအနှစ်များအဖြစ် သတ်မှတ်ထိန်းသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အကြိုက်နှင့်တန်ဖိုးမတူသူများ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်၍ ရသော ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ညှိနှိုင်းပေးရမည်။ ဤသည်မှာ ဘာသာရေးခေါင်းများ၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးအဖွဲ့စည်းအများစု၏ အလှသည် အရောင်အသွေးပေါင်း စုံလင်၏။ တစ်ရောင်တည်း ခြယ်ရန် မဟုတ်။ ဘာသာရေး၏ သင်္ကေတသည် ကြယ်တစ်လုံးတည်း မဟုတ်၊ ကြယ်တာရာအပေါင်း ခညောင်းသည့်ည ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကို တစ်ရောင်တည်းခြယ် ကြယ်တစ်လုံးတည်း ထားလျှင် စိတ္တဇဆန်လှ၏။ ရင့်ကျက်မှု မရှိ။ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကို တန်ဖိုးမထား။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှုပြုခြင်းသာ ဖြစ်၏။ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဤစိတ်နေစိတ်ထားကနေ စပြင်ရပါမည်။ ထိုသို့ ပြင်မှသာ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုး၏ကြန်အင်လက္ခဏာအစစ်အမှန်လည်းပေါ်လာစရာရှိသည်။
အခြားဘာသာဝင်းများလည်း လွတ်လပ်ခွင့်တစ်ခု ရပြီး တန်းတူရေးအသီးအပွင့်ကို အတူတူ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဆက်ဆက်သည် တန်တူးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှောင်လွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဤမှားယွင်းသော အတွေးအခေါ်များကို မပြင်သေးသရွေ့ တန်းတူရေး မရှိနိုင်၊ တန်းတူရေးမရှိသေးသရွေ့ဘာသာရေးမီးကို မငြိမ်းသတ်နိုင်၊မငြိမ်းသေးသရွေ့ ဘာသာဝင်းများအကြား သာယာဝပြောအောင် မလုပ်နိုင်ပေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာလူမျိုးပေါင်း ရှိသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေ့ ရှိသည်။ သို့သော် ယင်းဘာသာလူမျိုးပေါင်း တို့၏ တန်းတူအခွင့်အရေးကို မပေးဘဲ ထိုလူမျိုး၏ ပင်မဘာသာကြီး(၄)မျိုးကို ချုပ်ကိုင်ထားခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအပါအဝင် မည်သည့်ဘာသာဝင်မှ မလွတ်လပ်တော့ပါ။ ယင်းဘာသာလူမျိုးပေါင်း တို့သည် တန်းတူရေးအပြည့်အဝဖြင့် နေထိုင်နိုင်မှသာလျှင် စစ်မှန်သော လူအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်နိုင်သည်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးက အလှသွေးကြွယ်၍ တင့်တယ်ပါမည်။
ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုးနှင့် ဧည့်နိုင်ငံသား တရုတ်၊ ကုလား အစရှိသည်ဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။ ဧည့်နိုင်ငံသား တရုတ်ကုလားများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်လာကြမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်တွင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စာလှယ်များ မရရှိနိုင်သော်လည်း မိမိကြိုက်ရာအမတ်များကို မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာအစရှိသော ကျန်တိုင်းရင်းသားများမှာ မြန်မာပါလီမာန်တွင် အမတ်အဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးခံနိုင်ကြသည်။ ဤလူမျိုးပေါင်းစုံရှိသော မြန်မာလွှတ်တော်မှ ဥပဒေများ ပြုကာ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်သော မြန်မာအစိုးရက မြန်မာကို စီမံအုပ်ချုပ်ရသည်။ကျန်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်နယ်အမတ်များသည် ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် တန်းတူရေးတန်ဖိုးကို သိရှိနားလည်ပြီဖြစ်၍ နိုင်ငံတော်ဘာသာကို တာဝန်ခံရာ၌ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်တန်းတူရေးကိစ္စရပ်များကို လွယ်လင့်တကူ လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ မြန်မာသည် အင်အားအကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာမည်မှာ သေချာလှသည်။ ထိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တစ်ခြားသော ကမ္ဘာနိုင်ငံများတွင်ကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်လူမျိုးတန်းတူရေးကို အခြေခံရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာပါလီမာန်တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင်မည်ဖြစ်ရာ အရောင်အသွေး စုံလင်လှ၏။ မြန်မာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (သို့) မြန်မာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖူးသူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာသမ္မတ ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များသည်။ မြန်မာသည် အခြားနိုင်ငံများ၏ စံပြ ဖြစ်လာမည်မှာ သေချာလှသည်။ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုသည် သီးသန့်ရှင်သန်ဖွံ့ထွားလာမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာ့တက္ကသိုလ်များသို့ နိုင်ငံတကာပေါင်းစုံ လာရောက်လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သည် အခြားတိုင်းပြည်များ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို သယ်စရာမလိုတော့ဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြင့် နေနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ကင်းသည့် မြန်မာများကို တစ်ခြားဘာသာတိုင်း လေးစားအတုခိုးဂုဏ်ယူနေကြပါမည်။
ဤသို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးရာပါကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်နိုင်ကြသည်။ မိမိကံကြမ္မာကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးပင် ဖြစ်သည်။ ပြဿနာမှာ ဤ Intrinsic Value သတ်မှတ်သည့်နေရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အသိုင်းအဝိုင်း၊ အစိုးရအသိုင်းအဝိုင်း၊ ဒီမိုကရေစီအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် တစ်ခြားသော ဘာသာရေး အသိုင်းအဝိုင်းတို့ကြား ကွာဟမှုများ ရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ မွေးရာပါတန်းတူရေးသည် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့် ဆီလျှော်မှသာလျှင် ဗဟုဝါဒီများက လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာရှိသည်။ လောလောဆယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးထက် ကျယ်ပြန့်သော ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးက အရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
ရွှေဝါရောင် အရှင်ထာ၀ရ (နော်ဝေ)
HE Petru Lucinschi, President Republic of Moldova 1997-2001
In general, there are 8 broad elements of democracy:
01:41 ဓါတ္ပုံ No comments
4. Diversity and Negotiation
01:04 ဓါတ္ပုံ No comments
Tips for working together effectively:
Have you ever noticed that we participate in different communities in our daily lives?
00:53 ဓါတ္ပုံ No comments
Have you ever noticed that we participate in different communities in our daily lives? The people we live with, work with, study with or hang out with can all be considered different communities.
ဒကာတယောက်က စာရေးပြီးတော့ အရှင်ဘုရားရေး စာအုပ်တွေ ထပ်ပြီးတော့ မထုတ်တော့ဘူးလားဘုရား။
12:18 သတင္း No comments
ကိုယ်က နာမည်မရှိတဲ့ စာရေးသူဆိုတော့ စာအုပ်တွေ ထပ်ပြီးထွက်ဖို့ ကြာပါအုံးမည်။
စာအုပ်တွေ ထပ်ပြီးတော့ ထုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါသည်။စာအုပ် တအုပ်ထုတ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က အများတာကြောင့် ရေးထားတဲ့ စာမူတွေကတော့ ၁၀အုပ်စာလောက်ရှိနေပါသည်။ နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ပညာရေးနှင့် ရွှေဝါရောင် ဒုတိယအပိုင်းကို ထုတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေ့ပါသည်။အလှူရှင်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ လက်ထဲကို အမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ဒီလို ဒီလို အခက်အခဲများစွာ အောက်မှာ မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။
ကိုယ်က စာပေးသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူ့ဘဝမှာ လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ထက် လူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရှင်သန်သွားခြင်းတာပါပဲ။
မိမိကိုယ် မလိုအပ်ဘူး ထင်တဲ့သူတွေ စွန့်ပစ်သွားလည်း မိမိကို လိုအပ်လာမယ့်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး နေထိုင်ကြိုးစားသွားမှာပါ။
ဘဝစာပေ တစ်ရပ်ပါပဲ အဲဒါကြောင့် အားတဲ့အချိန်တိုင်း စာဖတ်သူတွေကို အကောင်းဆုံး စာပေဗဟုသုတတွေပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါသည်။
""""မိမိတို့အားလုံး အတွက် ဝမ်းသာစရာ သတင်း""""
12:12 သတင္း No comments
စဉ်းစားတတ်သူတွေ အတွက် ရယ်မောစရာပါ..
မိမိအားလုံး ကောင်းသောစိတ် ကောင်းသောအတွေးနဲ့
နေထိုင်ရင် ကိုယ့်ဘဝမှာ ကောင်းတာတွေ
ကိုယ်ပြုသမျှ ကိုယ်တွေးတော ကြံစည်သမျှ
ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းတွေဟာ ကိုယ့်ဆီကို
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်က မအောင်မြင်ခဲ့ရင် အောင်မြင် သူအတွက် မုဒိတာပွားပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ အောင်မြင်လာပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်က မပျော်ရွှင်ခဲ့ရင် ပျော်ရွှင်သူအတွက်
မုဒိတာပွားပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ ပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်က ကံမကောင်းခဲ့ရင် ကံကောင်းသူ အတွက် မုဒိတာပွားပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ ကံကောင်းသူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်ဟာ အောင်မြင် ပျော်ရွှင် ကံကောင်းသူ
ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ မပြည့်စုံသူတွေကို မေတ္တာစိတ်နဲ့ စာနာဖေးမလိုက်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့အချိန်မှ မိမိတို့အားလုံး သတင်းကောင်းများ စပြီးကြားရပါပြီ။
နော်ဝေနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေ အနေအရတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို အကောင်းဆုံး ထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ တခုကိုရောက်ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့အားလုံး #StayHome #BlirHjemme #HjelpOssHjelpDeg အိမ်မှာ နေခြင်းဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
""""နော်ဝေ၏ လက်ရှိ အခြေအနေ""""
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅-ရက်နေ့ကနေ ဒီနေ့ မေလ ၇-ရက် အထိ
စုစုပေါင်း ပိုးစစ်ပြီးသူ ........... ၁၉၁၉၄၆။
ပိုးတွေ့ရှိသူ ........................... ၈၀၁၅။
ဆေးရုံတင်ထားသူ ...................၂၈ ။
အရေးပေါ် စိုးရိမ်ရသူ ................. ၁၈။
ဒီနေ့သေဆုံးသူ ၁ယောက် အပါအ၀င် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း... ၂၁၇။
ပိုးကူးစက်ထားသူ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်း ......၆၈။
အိမ်မှာနေရသူ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်း ......၅၂၆။
ဒီနေ့ နော်ဝေ အစိုးရ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရ
မေ ၇ရက်နေ့က စပြီး လူ ၅၀ ထိ စုနိုင်ပါပြီ။
နော်ဝေနိုင်ငံရှိ ကျောင်းများအားလုံး မေလ ၁၁ ရက်နေ့ ကျောင်းအကုန် ပြန်ဖွင့်ပါမည် ။နော်ဝေနိုင်ငံရှိ လူများစုပြီးတော့ လုပ်ရမည့် ပွဲလန်းသဘင်များနဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲတော်များကို လူ ၂၀၀ထိ စုခွင့်ပေးပါမည်။
နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်များကတော့ အပန်းဖြေ ခရီးသွားခြင်းနှင့် သို့သော် နိုင်ငံခြား ခရီးထွက်လည်ဖို့တော့ တစ်ခြားထွက်လည်ဖို့တော့ တစ်ခြားနိုင်ငံများနဲ့ ဆက်စပ် နေတာမို့ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးမှသာ ပြောဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
လူကိုယ်တိုင် လုပ်မှ ဖြစ်မယ့်သူများ လုပ်ပါ။
အိမ်မှ နေ၍ လုပ်လို့ ပြေလည်နေသေးသော အလုပ် များ အိမ်မှပဲလုပ်ပါ။
အကွားအဝေးနှင့်နေခြင်း၊ ဖျားတာနဲ့ အပြင်မထွက်ပဲနေခြင်းများအား ယခု လိုက်နာသလို ဆက်လက်လိုက်နာပါရန် တိုက်တွန်ကြောင်း ပြောဆိုပါသည်။
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာ ရှိပါစေ
ထုိင္းသတင္းစာ ကာတြန္းဆရာတစ္ဦးက အခုလုိ ပုံေဖာ္လုိက္ပါတယ္ ......